Promised Land (2012) | MM Movie Store
မငျးသားကွီး မကျဒါမှနျ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ…လတျတလော ရပေနျးစားနတေဲ့ သဘာဝဓာတျငှထေု့တျလုပျဖို့ကိစ်စအတှကျ ကုမ်ပဏီကမကျလုံးတှပေေးတာကို နယျခံတှရေဲ့ မွဝေယျဖို့ကွိုးစားကွတယျ….
ဒီလိုအနအေထားမှာ ဘိုးစဉျဘောငျစဉျမွမေို့ ဘယျလောကျပေးပေး မွူတဈမှုနျ့စာတောငျရောငျးဖို့ဆန်ဒမရှိတဲ့ သူတှေ ရှိကွသလို မြားပြားလှနျးတဲ့ ငှကွေေးကွောငျ့ ရောငျးပွီးပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ဘဝကို တကျလှမျးနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျကွသူတှလေညျးရှိတယျ..
တဈခြို့တှကေလညျး သဘာဝဓာတျငှကေု့မ်ပဏီကွောငျ့ မိမိတို့လူနမှေုဘဝကိုပါမြားစှာထိခိုကျမယျလို့လညျး ယူဆနကွေတဲ့သူတှရှေိတယျ…ဘယျသူတှကေ အနိုငျရသှားမလဲ…အနိုငျရဖို့ကွိုးစားတဲ့နရောမှာ ဘယျလိုမွှုတျကှကျတှရှေိမလဲ…ဘယျသူတှကေရော မှနျနကွေလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…
မင်းသားကြီး မက်ဒါမွန် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်…လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ဖို့ကိစ္စအတွက် ကုမ္ပဏီကမက်လုံးတွေပေးတာကို နယ်ခံတွေရဲ့ မြေဝယ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်….
ဒီလိုအနေအထားမှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်စဉ်မြေမို့ ဘယ်လောက်ပေးပေး မြူတစ်မှုန့်စာတောင်ရောင်းဖို့ဆန္ဒမရှိတဲ့ သူတွေ ရှိကြသလို များပျားလွန်းတဲ့ ငွေကြေးကြောင့် ရောင်းပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကို တက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြသူတွေလည်းရှိတယ်..
တစ်ချို့တွေကလည်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီကြောင့် မိမိတို့လူနေမှုဘဝကိုပါများစွာထိခိုက်မယ်လို့လည်း ယူဆနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်…ဘယ်သူတွေက အနိုင်ရသွားမလဲ…အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုမြှုတ်ကွက်တွေရှိမလဲ…ဘယ်သူတွေကရော မှန်နေကြလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…